Otu esi edobe ma ọ bụ gbanwee mpaghara oge na Debian 11 - LinuxCapable
Otu esi edobe ma ọ bụ gbanwee mpaghara oge na Debian 11
September 12, 2021 September 12, 2021 by Jọshụa James
Mpaghara oge - Usoro njedebe
Mpaghara oge - Usoro GUI
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi ahazi Timezone na Debian 11 Bullseye.
Nke mbụ, lelee ka ịhụ mpaghara oge dị ugbu a na ọdụ Debian gị site na ịpị iwu a:
Iji gbanwee ntọala mpaghara oge na ọdụ gị, ị ga-ebu ụzọ chọta mpaghara na usoro obodo. Iji mee nke a, ị ga-eji (timedatectl) iwu ka ibipụta ndepụta a n'ime (mpaghara/Obodo) Hazie.
Ị ga-ahụ ogologo aha mpaghara/obodo, jiri igodo akụ (elu) na (ala) kiiboodu ka ịnyagharịa ruo mgbe ịchọtara mpaghara oge ị na-eso.
Maka nkuzi a, edobere ya (Australia/Queensland) iji iwu:
Ndị ọrụ desktọpụ Debian nwere nhọrọ nke abụọ ịgbanwe ntọala mpaghara oge na eserese kama iji nhọrọ ọdụ. Iji GUI kama nwere ike ịdị ngwa ngwa ma dị mfe maka ndị ọrụ ọhụrụ na Linux na Debian.
Nke mbụ, mepee ntọala sistemụ, nke kachasị ngwa ngwa bụ site na ịpị n'akụkụ aka nri elu nke ihuenyo Debian gị dị ka egosiri n'okpuru wee pịa. (nhazi):
Na-esote, n'akụkụ aka ekpe, pịgharịa gaa na ala ruo mgbe ịchọtara ya (Ụbọchị & Oge) taabụ wee pịa ya aka ekpe iji gosi ntọala mpaghara oge na mpio GUI aka nri. Ekwesịrị ịtọ nke a na-akpaghị aka na ndabara ma ọ bụrụ na ejikọrọ sistemụ arụmọrụ gị na ịntanetị maka ndị ọrụ desktọpụ.
Ka ịhọrọ mpaghara oge ọhụrụ, pịa na (Oge Mpaghara) n'akụkụ aka nri, ugbu a bụ (AEST (Brisbane, Australia) dị na foto anyị dị n'elu. Ị ga-ahụ popup ọhụrụ nwere maapụ, ebe a ị na-eji bọtịnụ òké aka ekpe họrọ ebe ị nọ, nke ga-agbanwe mpaghara oge gị ozugbo na maapụ.
Ozugbo ịhọrọla mpaghara oge ziri ezi, pịa ya (X) n'akụkụ aka nri elu ka itinye, na nke ahụ bụ na ị gbanweela mpaghara oge nke ọma site na iji GUI.
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Timezone Mail igodo
Otu esi etinye nlebanya Sistemu Glances na Debian 11